Nostalgic taraamka iyo History of taraamka nostalgic ee Turkey | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAHistory of taraamka nostalgic iyo taraamka nostalgic ee Turkey
06 / 07 / 2012 DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Tareenka nostalgic waxaa loo yaqaana habka tareenka ee loogu talagalay ujeedooyinka dalxiiska, marka lagu daro adeegga gaadiidka rakaabka ee magaalada. Ujeedada, habka, waa inay dadka ku safraan taariikhda magaaladaas.
Fikradda tareenka nostalgic ayaa markii ugu horeysey uuraysatay Talyllyn Nostalgic Train, kaas oo la aasaasay lana shaqeynaayey koox tabarucayaal ah oo Wales ah sanadii hore 1950. Inkasta oo dhaqdhaqaaqani yahay dhaqdhaqaaq si loo ilaaliyo waagii hore, waxay keentay tareen badan oo Nostalgic Train maalintaas.
Wadada uu jecel yahay Nostalgic Tram waa USA. Magaalooyin badan, khadadka Nostalgic Tarmvay, oo sidoo kale loo yaqaanno tareenka tareenka taariikhiga ah, waxay qaadanayaan meeshooda iyadoo la raacayo hababka tareenada fudud. Sida adduunka intiisa kale, ujeedada taageerayaasheeda ee America waa inay isticmaalaan qaabkan fudud oo la isku halleyn karo. dadka qarniga. Tareenada noocan oo kale ah ma ahan kuwo ku haboon isticmaalka naafada, inkasta oo qaar badani dib loo habeeyey.
Nidaamyadan ayaa si guul leh looga shaqeynayaa in ka badan labaatan magaalo oo ku yaala Maraykanka. Waxa kale oo ay ku saabsan tahay in ay qayb ka noqoto nidaamka gaadiidka magaalooyinka qaar.
Hong Kong Tramways ee Hong Kong ayaa sidoo kale loo arkaa inay qayb ka tahay dhaxalka Hong Kong.
Inta badan xarumaha tareenka ee taariikhiga ah ee England ayaa la saaray ka hor intii aanay bilaabin Dhaqdhaqaaqa Nostalgia. Gawaarida iyo taraamyada ayaa hore loo xayiray. Inkastoo taraamadu haatan u muuqato inay ku soo laabanayso magaalooyinka England, waxaa lagu tilmaamay taanyeer casri ah.
Ereyga Nostalgic Tram (Heritage Trolley ama Vintage Trolley) waxaa loola jeedaa isticmaalka tareenka ee hadda lagu isticmaalo taraamyada loogu talagalay oo loo adeegsan jiray sanadaha 1900-1950. Kuwani waa imtixaannada hadda ee tareenada hore ee qeybtii hore ee qarnigii XNUM, iyada oo aan waxyeellayn muuqaalka iyo sifooyinka farsamada, iyo sidoo kale qaababka dib loo soo celiyay ee tirooyinka dhabta ah maalmahaas. Meelaha qaarkood, Nostalgic Tram (Vintage Trolley) waa baabuurta asalka ah ee u adeegta si joogto ah, iyo Nostalgic Tram (Heritage Trolley) ayaa inta badan loo adeegsadaa sida taraamijka ama taraamijka, laakiin inta badan waa isku mid.
Taraamooyinkani waxay u qaybsan yihiin naqshad yar yar, hal xargo oo isku dhejis ah (laba xaarood oo u dhigma jir-dhisaha oo aan isbedelayn) iyo dhismo dhejis ah oo labajibbaaran (afar axwaal, oo leh hal xargo oo loo dhigo labada gaadhigba). Kuwa kali ah waxay badanaa ka yaryihiin mitirka 9 dhererka oo waxay leeyihiin awoodda kursiga 25-30. Tareenada waddooyinka waxaa loo isticmaalaa hal baabuur, oo ka soo jeeda moodooyinka asaasiga ah ee sanadaha 1890 si loo horumariyo laba noocyo toban sano ka dib. 20. Bilowga qarnigii badankood ayaa lumay ama lumay muhiimaddooda.
Inta lagu jiro Dagaalkii Dunida I, oo ay ka mid yihiin bandhigga Birney Safety Carabta, waxa ay noqdeen kuwo caan ah oo la soo bandhigay, kuwaas oo ahaa kuwo casri ah, mid fudud oo loo isticmaalo qof keliya (horeyba laba qof oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan makaaniiste iyo kormeer), waxaana loo sii waday in lagu isticmaalo magaalooyinka yaryar sanado. Noocyada labaduba waa caadi ahaan mitirka 10-15, 45-70 iyo kursiga 20. qarniga waxaa loo tixgeliyaa awoowaha taariiqda loo isticmaalo.
Tareenada waxaa ku shaqeeya koronto koronto 600 oo ka sameysan fiilooyinka ka soo gudbaya buuraha. Tamarta korontada ee hadda tooska ah ayaa loo celiyaa xarunta korontada iyada oo loo marayo jidadka. Tareenadaasi waxay leeyihiin labo ama afar mishiino oo barbar dhigaya qalabyada ku yaal moodooyinka waawayn iyo dareenka qumman ee moodooyinka cusub. Nidaamyada farsamada waxay ku shaqeeyaan hawo cadaadis leh. Hawada la riixo si ay u bixiso braking waxaa lagu helaa kombiyuutarada korantada.
taraamka nostalgic ee Turkey
Nostalgic Tramvaylar in 37 sano adeegaya sida tusaale loo furay ka dib markii darajo sare ah Kadıköy-Moda Daraamka oo Tunnel ee Beyoglu-Taksim ee Turkey, waxaan tusi kartaa Streetcar ah. Halkan waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan taraamooyinkan:
1 Nofeembar 2003 Kadiboy-Moda Tram, oo loo adeegsaday bishii Nofembar, wuxuu leeyahay xarun 2,6 oo ku yaalla nidaamka 10. Gaadiidka Kadikoy-Moda; Gaaritaanka Kadikoy Square, basku wuxuu raacayaa wadada khaaska ah iyo Wadada Bahariye wuxuuna ku soo noqonayaa Kadikoy Square oo ku maraya Moda Avenue. Tirada duulimaadyada khadka u adeegaya qiyaastii 2 kun oo rakaab ah maalin walba waxay ku dhowyihiin 80.
Tareenka Tunnel-Taksim waxaa loo dhisay dhamaadkii line-ka 1990. Waxaa jira seddex motris (jiidis) iyo laba taraag oo woqooyi ah. Intaa waxaa dheer, in adeegyo dalxiis oo dheeraad ah, 14.600 waxay bixisaa adeegyo maalinle ah celceliska rakaabka 6 kun sannadkii.
Tartiibooyinka, qof qaraabo ah oo loo yaqaan 'trains', ayaa sidoo kale loo isticmaalay Ankara iyo Izmir. Kadib, dadweynaha ku soo qulqulaya magaalooyinka ayaa horseeday xalal cusub oo gaadiidka dadweynaha. Khadadka Tralleybus ee Izmir ee bilowga waddooyinka leh 1980'li, ayaa hore looga saaray Ankara. Raadinta kaliya ee ka badbaaday Ankara waa mawduuc ka mid ah xarigga oo ku dheggan tuubada Hamamönü faca ah ee dhismaha Degmada Altyndağ.
Taariikhda TCDD iyo Sawirrada Nostalgic
Taariikhda nidaamka calaamadaha
Taariikhda Metrobus ee Istanbul
Taariikhda Mashruuca Marmaray
Waa maxay Trambus? - Taariikhda Trambus
JAMHUURIYADA QARAMADA MAS'UULIYADA Qeybta 2006 20 Xaaladda Cilmi-baarista 1: Gaaritaanka Rakaabka (Weli Socota) Mashruucan: 9
TCDD Erzurum Garage Ahage Ahmet Basar, Village Logistic ee magaalada ayaa soo warisay.